swadeshi laghubitta(swadeshi laghubitta) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
स्वदेशी लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले गत वर्षको मुनाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयरका लागि संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ५३७.५० रुपैयाँ कायम गरेको छ । मूल्य समायोजनअघि हिजो बिहीबार संस्थाको...
प्रभु बैंकको वार्षिक साधारणसभा आज, लाभांश पारित मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडको १८ औँ वार्षिक साधारणसभा आज शुक्रबार हुँदैछ । गत वर्षको लाभांश पारितको मुख्य अजेन्डासहित प्रभु बैंकले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौको बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालय दिउँसो २ बजेदेखि गर्दैछ । गत असोज १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको हो । सभामा विशेष...
स्वेदशी लघुवित्तको बम्पर लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्ताव गरेको बम्पर लाभांश सुरक्षित गर्ने आज बिहीबार अन्तिम मौका रहेको छ । संस्था गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई कुल ३५ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । जसमा २० प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश (लाभांश करसहित) रहेको छ...
स्वदेशी लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा मंसिर १६ गते, लाभांश र हकप्रद सेयर पारित मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । लाभांश र हकप्रद सेयर पारित मुख्य अजेन्डासहित स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो पाँचौँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ । संस्थाको हिजो बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा मंसिर १६ गते सुनसरीको इटहरीमा गर्ने तय गरेको छ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट आफ्ना...
स्वदेशी लघुवित्तद्वारा बम्पर लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । स्वदेशी लघुवित्तले आफ्ना सेयरधनीका लागि बम्पर लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । कम्पनीको बुधबार दिउँसो ३ बजे बसेको संचालक समितिको ७७ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापूँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र १३.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको घोषणा गरेको हो । कम्पनीले सेयर तथा नगद लाभांशको कर प्रयोजनका...
रु. ६ सय प्रतिकित्ता मूल्यको सेयर सस्तोमै पाउने अवसर छुट्ला नि !
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा रु. ६ सय भन्दा बढीमा कारोबार भइरहेको स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर सस्तोमै पाउने अवसर आउने भएको छ । यो कम्पनीले हकप्रद निश्कासनको क्रममा नबिकेको ६२ हजार ५ कित्ता सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो । लिलामीमा बुद्धिमतापूर्वक बोल लगाउनेले सस्तोमै सेयर पाउने संभावना हुन्छ । यो कम्पनीले केहीअघि...
असोज २३ देखि स्वदेशी लघुवित्तको हकप्रद, कसले दिन पाउँछ आवेदन ?
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा ७ सय ८० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले आगामी असोज २३ गतेदेखि १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ११ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने भएको हो । हकप्रदमा कात्तिक २६ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ...
रिदीले बोनस सेयरलाई प्राथमिकता दिंदा स्वदेशी लघुवित्तको नगद लाभांशमा जोड
काठमाण्डौ । रिदी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३१५७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको घोषणा गरेको हो । कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि घोषित बोनस सेयर सेयरधनीले...
मिर्मिरे र स्वदेशी लघुवित्तले १०० % हकप्रद जारी गर्ने
काठमाण्डौ । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलमेन्ट बैंक लिमीटेडले १०० प्रतिशत हकप्रद निश्कासनको माग गर्दै धितोपत्र बोर्ड पुुगेको छ । यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ४ लाख ५ हजार कित्ता हकप्रद निश्कासनको माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएको हो । एनआइबिएल एस क्यापिटल यो कम्पनीको हकप्रद निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा काम गर्नेछ । हाल...
काठमाण्डौ । महाराजगञ्जमा मुख्य कार्यालय रहेको लक्ष्मी लघुवित्त बित्तीय संस्थाले आगामी मंसिर ३ गते आफ्नो छैठौं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कमलपोखरीस्थित अग्रवाल भवनमा यो कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको हो । साधारणसभाले संचालक समितिबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट आफ्नो सेयरधनीलाई १० प्रतिशतले हुन आउने बोनस...
स्वदेशीको आइपीओ : २५ हजारले पाए ६५.७ हजार खिस्स !
काठमाण्डौ । सुनसरीको इटहरीमा रहेको स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ३ लाख कित्ता आइपीओ निश्कासनका लागि बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको एनएमबी क्यापिटलले आइतबार बिहान बाँडफाँडको काम सम्पन्न गरेको छ । न्यूनतम ५० कित्तादेखि ११ सय २० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिएका लगानीकर्ताहरुलाई चिठ्ठाको माध्यमबाट आइपीओ बाँडफाँड गरिएको छ । यो समूहका...
३ करोडको आइपीओमा ३.३ अर्बको आवेदन !
काठमाण्डौ । स्वदेशी लघुवित्तले खुलाएको ३ करोडको आइपीओमा ३ अर्ब ३५ करोड बढीको आवेदन परेको छ । सुनसरीको इटहरीमा मुख्य कार्यालय रहेको स्वदेशी लघुवित्तको आइपीओमा अचाक्ली आवेदन परेको हो । बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार अन्तिम दिन अनपेक्षित संख्यामा आवेदनहरु परेका छन् । कुल तथ्यांक हेर्दा मागभन्दा करिब १२३ गुणा बढी आवेदन...